လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကွန်ပြူတာပညာသည်တစ်ဦး၏အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » လျှပ်စစ်မီးရရှိရေးကွန်ပြူတာပညာသည်တစ်ဦး၏အမြင်
Posted by MTY on Aug 13, 2012 in Copy/Paste, Other - Non Channelized |5comments
http://www.nyinaymin.org/ Web site မှာဖတ်ကြည့်မိရင်းသဘောထားခြင်းတိုက်ဆိုင်တယ်ထင်မိလို့ပိုင်ရှင်ကိုတောင်ခွင့်မတောင်းမိဘဲ
ကော့သောင်းကျောက်မီးသွေးစက်ရုံအား Technology နှင့် ပတ်သက်တဲ့ ကျွန်တော့်အမြင်
Posted: 09 Aug 2012 03:58 AM PDT
ကျွန်တော် အခုအချိန်အထိ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲ ရေးခဲ့တာ ချည်းပါပဲ။ လူမှု့ရေးခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မရေးခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု နည်းပညာနှင့်ဆက်စပ်ပြီး လူမှု့ရေးနှင့်ပတ်သက်နေတဲ့ အမြင်ကို ပြောပြချင်လို့ပါ။
ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံတစ်ခုရဲ့ လည်ပတ်ပုံ နည်းစနစ်၊ ကောင်းကျိုးနှင့်ဆိုးကျိုး ဒါတွေကိုကွဲကွဲပြားပြားမသိဘဲနဲ့ သူများပြောတိုင်း လိုက်ခေါင်းညိတ်နေရင်တော့ ပုတ်သင်ညိုပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။
အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ အရာတစ်ခုရဲ့အောက်မှာ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခဲ့ ရင်းခဲ့ရဒုက္ခခံခဲ့ရတာတော့ ရှိကြစမြဲပါ။ ဥပမာ အခုကော့သောင်းမှာ ကျောက်မီးသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ သဘာဝဘေးပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်နိုင်တာတွေနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောဆိုနေကြ တာတွေ၊ ဝေဖန်နေကြတာတွေကို ကြားသိနေရပါတယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကနေ စပြီးလုပ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်ဟာ နိုင်ငံရေးနဲ့ ပတ်သက်မှု့မရှိသလို နိုင်ငံရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲ ကင်းရှင်းအောင်နေခဲ့ ပါတယ်။ လုပ်နေတဲ့သူတွေကိုလည်း မချီးကျူးသလို မကဲ့ရဲ့ ပါဘူး။ ကိုလုပ်နိုင်လို့လုပ်ကြတာပါ။ ကျွန်တော် ခုချိန်အထိ ဘယ်သူ့ရဲ့
ထောက်ပံ့ကြေးမှ မပါဝင်တဲ့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဖောက် ကိုယ့်တံတားကိုဆောက်ပြီး ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ထမင်းစားခဲ့တာပါ။ အင်းပြောရင်းနဲ့ ကို့အကြောင်းပါသွားခဲ့တဲ့အတွက်ဆောရီးပါ။
ပြောချင်တာက အခု ဆန္ဒပြမယ်ဆိုလို့ ဘာဖြစ်လို့ပါလိမ့်ပေါ့။ကျွန်တော့်ကို လူတစ်ယောက် ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ oversea call နဲ့ ဆက်တာပါ။ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ကနေစည်းရုံးနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း အဲ့ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံကို ကန့်ကွက်ဖို့အတွက် ပို့စ်တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
ထိခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေပါ ပြောတာပေါ့။ အဲ့တော့ ကျွန်တော်ပြောတာဟာ ဘယ်သူ့ဖက်မှ မလိုက်သလိုဘဲ အလယ်တည့်တည့်ကနေ အမြင်ကိုပြောပြပါ့မယ်။ အခု
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လွှင့်ဖို့ စက်ရုံတည်ဆောက်လိုက်တဲ့ နည်းပညာသည် အခုမှလား။ မဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိခဲ့တဲ့ နည်းပညာပါ။ တိုးတက်နေတဲ့
အနောက်နိုင်ငံတွေ တော်တော်များများ ဥပမာ- အမေရိကန်၊ တရုတ်စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဟိုးအရင်အရင် စတင်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အချိန်အခါတုန်းက လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အလုံအလောက်
ရရှိစေဖို့ ကျောက်မီးသွေးတွေနဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ခဲ့ရသလို၊ သင်္ဘောတွေမှာလည်း ကျောက်မီးသွေးနှင့် လည်ပတ်တဲ့ စက်တွေဖြင့် ခုတ်မောင်းခဲ့ရပါတယ်။
အခုမြန်မာပြည်ဟာ တိုးတက်ဖို့ တာစူနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုအချိန်မှာ ကော့သောင်းမှာ မီတာခ တစ်ယူနစ်ကို မြန်မာကျပ်ငွေ (425 ကျပ်မှ 450 အထိ)
ရှိတတ်ပါတယ်။ အဲ့တော့ မီးချောင်းတစ်ချောင်းတည်း ထွန်းတဲ့ လူတွေအတွက် ဒီမီတာခဟာ မသိသာပေမယ့်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူအတွက်တော့ အရမ်းကို
သိသာပါတယ်။ ယူနစ် 100 ကို မြန်မာကျပ်ငွေ 45000 ကျပ်ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော် လစဉ်ပေးနေရတာသည် တစ်လကို တစ်သိန်းခွဲကျော် ပေးနေရပါတယ်။
ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းတစ်ခုတည်း အတွက်ပါ။ အဲ့တော့ တကယ့် လျှပ်စစ်ကို အဓိကထား သုံးနေရတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ မှာဆိုရင်
ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ရတဲ့ငွေထက် မီတာခ ပေးရတာက ပိုများနေသလိုပါပဲ။ အဲ့ဒါကို ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ က ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာနဲ့ တစ်ချို့က ဘုမသိဘမသိနဲ့ လိုက်ပြီး
လက်မှတ်ထိုးကြတာတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ လက်မှတ်ထိုးတဲ့သူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ စက်ရုံလည်ပတ်ပုံကနေ ဘေးထွက်ပစ္စည်းထွက်လာတဲ့အထိ အသေးစိတ်ကိုပေါ့။ ဘာမှ
သိကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့တော့ ခေတ်မီတဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေမှာတောင် တိုးတက်ခါစတုန်းက ဒီနည်းပညာကို သုံးခဲ့ကြသေးတာပဲ။ အခု တစ်ယူနစ်ကို 200 ကျပ် နှင့်အောက်
လောက်ပဲ ယူမယ်ဗျာ။ 200 ကျပ်ငွေပဲထား။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအတွက် တစ်ဝက်ကျော်သက်သာသွားပြီ။ အဲ့လိုသက်သာမှလဲ။ တိုးတက်တဲ့ခေတ်မီစက်တွေနဲ့
လုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နိုင်လာကြမှာပါ။ စက်မှု့လက်မှု့တိုးတက်ဖို့ လျှပ်စစ်မီးဟာ အဓိကပါပဲ။ အခုလို ကော့သောင်းမှာ ကျောက်မီးသွေးနှင့် လျှပ်စစ်မီးထုတ်လုပ်ဖို့ စက်ရုံကို
သိန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံပြီး မီးရရှိရေးအတွက် ကြိုးပမ်းမှု့ကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့တော့ ကြိုဆိုပါတယ်။ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ပဲ
ဆက်ကြိုးစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါမှသာ ကော့သောင်းမြို့ဟာ စီးပွားရေးနှင့် လူနေမှု့အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေမှာပါ။ လူတိုင်းနီးပါး ရေခဲသေတ္တာသုံးနိုင်လာမယ်၊
အဲယားကွန်းတတ်နိုင်လာမယ်။ လျှပ်စစ်စက်ပစ္စည်းတွေကို သုံးနိုင်လာမယ်ဗျာ။ အဲ့တော့ ဒါဟာ ဖြစ်သင့်တယ်။ ဖြစ်ထိုက်တယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ ယူဆပါတယ်။
ကျွန်တော့်ကို ကန့်ကွက်စာရေးပေးဖို့ ဖုန်းဆက်တဲ့ အစ်ကို့ကိုတော့ အားနာပါတယ်။ ကန့်ကွက်စာရေးခိုင်းလိုက်တာဟာ ကျွန်တော်ကို ဖြစ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို
ရေးပေးဖို့အတွက် တွန်းအားပေးလိုက်သလိုပါပဲ။ အခုမီးအားပေးမည့် နည်းစနစ်သည် အခုမှ ကော့သောင်းမှာ စတင်လုပ်ဆောင်မှာ အကောင်အထည်ဖော်မည့်
နည်းစနစ်အသစ်မဟုတ်ပါဘူး။ အနောက်နိုင်ငံတွေ သုံးခဲ့ဖူးပြီးသား နည်းပညာပါ။ ဟုတ်မဟုတ် အင်တာနက်မှာ လိုက်ရှာလိုက်ပါ။ အခုဆိုရင် အဲယားကွန်းမပြောနဲ့ ပန်ကာတောင်
အပတ်ရေမြန်မြန်လည်လာရင် ပြန်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။ အအေးပတ်သွားမှာကြောက်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ မီတာခ သက်သာစေဖို့ပါ။ အဲ့လိုဖြစ်လာလေ လျှပ်စစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပစ္စည်း
အ၀တ်လျှော်စက်အပါအ၀င် ၀ယ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ မသုံးနိုင်ကြပါဘူး။ ဘာလို့လဲလို့ အဖြေရှာရင် ဘယ်လိုပဲ ပုံသေနည်းတွေနဲ့တွက်တွက် အဖြေဟာ မီတာခ ဈေးနှုန်းမြင့်မားလို့ပါ။
ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်တဲ့ အစ်ကိုကိုလည်း ကျွန်တော်ပြန်ပြောဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်ကနေ ကန့်ကွက်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ အားလုံးက ကန့်ကွက်လို့
စက်ရုံပိတ်ခံရပြီ ဆိုပါစို့ဗျာ။ ခင်ဗျားအနေနဲ့ အခု အဲ့စက်ရုံကနေ ကောက်ခံမည့် တစ်ယူနစ်ကို 200 ဈေးနှုန်းနှင့်တူညီတဲ့ လျှပ်စစ်မီး အလုံအလောက်ကို ပေးနိုင်မလားလို့
ကျွန်တော်မေးပါတယ်။ သူကပြန်ဖြေပါတယ်။ အခုတော့ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သေးပေမယ့် နောက်တော့ အကောင်အထည်ဖော်ပေး မှာပါတဲ့။ နောက်ဆိုတာ တကယ်တော့
ကျောပဲရှိပါတယ်။ လက်ရှိ လျှပ်စစ်မီးပြဿနာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ရင်ဆိုင်နေရ တာတွေက ကော့သောင်းတစ်မြို့လုံးတင်မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်နိုင်ငံလုံးပါ။ ရန်ကုန်မှာတောင်
အ၀တ်လျှော်စက်သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။ ကော့သောင်းမှာတော့ ၀ယ်နိုင်ရဲ့သားနဲ့ မသုံးနိုင်ကြဘူး။ အတော်စိတ်မကောင်းစရာပါ။ အခုလို လုပ်ပေးမယ့်သူပေါ်လာလို့ ၀မ်းသာမယ်
ကြံသေးတယ်။ ကန့်ကွက်ဖို့အတွက် လိုက်ပြီး စည်းရုံးနေတဲ့ အဖွဲ့ကိုတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လေး အံ့သြမိပါတယ်။ ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
နည်းပညာတိုးတက်လာဖို့ အဓိကဟာ လျှပ်စစ်မီး ဖြစ်သလို။ နည်းပညာ တိုးတက် လာတာနှင့်အမျှ ဘေးထွက်ဆိုးကြိုးတွေကို နည်းပါးအောင် နည်းပညာအကူအညီနဲ့ ပြန်ပြီး
လုပ်ဆောင်သွားနိုင်ပါတယ်လို့လဲ အကြံဥာဏ်ပေး လိုက်ပါတယ်။ ကော့သောင်းမှာ ရှိတဲ့သူများ အားလုံး ဖြစ်သင့်တာနှင့် ဖြစ်ထိုက်တာကို ဝေဖန်နိုင်ပါစေ၊ ပိုင်းခြားနိုင်ပါစေလို့
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆန္ဒပြုလိုက် ပါတယ်။ အားလုံးပဲ သူများနိုင်ငံမှာ သုံးနေသလို လျှပ်စစ်မီးကို ပေါပေါသီသီ သုံးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
(ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံရှိ မည်သူနှင့်မျှ မပတ်သက်သလို၊ သက်ဆိုင်မှု့လည်းမရှိပါ။ ဖြစ်သင့်တာကို ထောက်ပြခြင်းသက်သက်သာ ဖြစ်ပါတယ်)
(နောက်တစ်ခုကတော့ ၀န်ထမ်းခန့်အပ်တာမှာ ဘယ်သူနဲ့အမျိုးတော်လည်း၊ ဘယ်လိုပတ်သက်တာလည်း စသည်ဖြင့် လူမှု့ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကိုသာ
အဓိကထားမေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ တကယ်ဖြစ်သင့်တာသည်။ ယခုလို လုပ်ငန်းမျိုးမှာ တကယ်တတ်ကျွမ်းသော လူငယ်များနှင့် စာရင်းဇယား ကျွမ်းကျင်စွာ ကွန်ပျူတာဖြင့်
တွက်ချက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လူမျိုးကိုပဲ ဦးစားပေးခန့်အပ်ရမည့်အစား၊ လူမှု့ရေးနှင့် ပတ်သက်သူများ ကိုသာ ခန့်အပ်နေတာတွေဟာ အဲ့လို လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ပေးမည့်
စက်ရုံအတွက် အလွန်ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုပါ။ တကယ်တတ်ကျွမ်းတဲ့သူများ ကတော့ ဘေးရောက်ပြီး အမျိုးတွေက နေရာယူနေတာဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ရည်ရှည်မှာ
လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ထိုခိုက်မှု့တွေ၊ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ အဲ့လို ၀န်ထမ်းခန့်အပ်တဲ့အခါမှာ နည်းပညာမေးခွန်းများအစား အမျိုးစပ်သည့်
မေးခွန်းတွေမေးနေတာဟာ အတော်ဆိုးရွားတဲ့ အဖြစ်အပျက် တစ်ခုပါပဲလို့လဲ ပြောချင်ပါတယ်။)
ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး မှားယွင်းစွာ ထင်မြင်နေသူများအား ဖြေရှင်းပြခြင်း
Posted: 12 Aug 2012 08:27 PM PDT
၁။ ၀ဘ်ဆိုက်တွင် အသံအရမ်းကျယ်လို့ ဘေးအိမ်တွေနဲ့ ကျောင်းကတောင်မှ ကလေးတွေ လန့်ပြေးကြတယ်လို့ ဆိုထားတဲ့ ၀ဘ်ဆိုက်အတွက် ပြောပြချင်တာလေးပါ။
ဖြေ။ ကျောက်မီးသွေး စက်ရုံစတင် မလည်ပတ်ခင်မှာ အထဲမှာ ရှိနေတဲ့ သံမှုန်များနှင့်ချေးများကို ရေနွေးနှင့်ချေးချွတ်ရပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အထဲက
အမှုန်အမွှားများနှင့်လည်ပတ်မှု့စနစ် ရှင်းလင်းသွားအောင်လို့ စက်ရုံကို ရေနွေးငွေ့ကို pressure ပေးပြီး အပြင်ကို ရေမကျန်အောင်နှင့်အထဲကကချေးများ ပြင်းထန်စွာတုန်ခါပြီး
အပြင်ကိုထွက်သွားအောင်လို့ လွှတ်ထုတ်ရပါတယ်။ ဒါဟာ ပထမတစ်ချက်ပါ။ အမြဲတမ်းဖြစ်နေမယ့် အရာမဟုတ်ပါဘူး။
၂။ မီးခိုးပြာများကျလို့ အနားက အိမ်တွေတောင် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရပါတယ်။
တစ်ခြားသူအတွက်တော့ ဘယ်လိုနေလဲတော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အတော့်ကို ဟာသပါပဲ။ စက်ရုံတောင် စပြီးမလည်ရသေးပါဘူး။
ချေးချွတ်ဆေးကြောနေတဲ့အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ အဲ့မှာ အသေးစိတ်သိချင်ရင် အင်္ဂလိပ်လို ကျွမ်းကျင်သူများနှင့် မေးမြန်းခွင့်ရှိသူများ တာရိုက်မေးမြန်းကြည့်ပါ။ သိပါလိမ့်မယ်။
စက်ဆေးတဲ့အတွက် မီးခိုးပြာက ဘယ်ကကျသသလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တော့် မခန့်မှန်းတတ်ပါ။
၃။ နေအိမ်နဲ့အရမ်းနီးလို့ဆိုတဲ့ ညီလေးတစ်ယောက် အတွက်ကိုလည်း ပြန်ပြောပြချင်ပါတယ်။
ယခုသတ်မှတ်ဆောက်လုပ်ထားသော နေရာသည် ညီပြောသလို နေအိမ်နှင့်ညီပြောသလောက် မဝေးပါ။ ပြီးတော့ စက်ရုံတကယ်လည်ပတ်ပြီဆိုရင် အင်ဂျင်သံသာ
ဘာသံကြားရမလဲ၊ အခုလည်ပတ်နေတဲ့ စက်သုံးဆီအင်ဂျင်သံ(မြို့လည်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် စက်ရုံ)နှင့် ယှဉ်ကြည့်လိုက်ပါ။ လည်ပတ်မှု့အဆင့်ရောက်မှ ဒါတွေကို
ဝေဖန်ပါ။ မြို့ရဲ့ ၁၀၀%လောက်ဟာ ဒီလုပ်ရပ်ကို ဖြစ်မြောက်ဖို့ ဆုတောင်းတဲ့သူနဲ့ မဖြစ်စေချင်သူ ဘယ်သူများမယ်ထင်ပါသလဲ။ ကျွန်တော့် ခန့်မှန်းချက်အရ ၉၃%
ကျောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ တကမ္ဘ္ဘာလုံးမှာ မီးအသုံးအများဆုံးနိုင်ငံက ဘယ်နိုင်ငံလဲ။ မီးဘာလို့သုံးနိုင်သလဲ။ ကိုပဲပြန်ဖြေပေးပါ့မယ်။ တရုတ်နိုင်ငံပါ။ ဘာလို့
တရုတ်နိုင်ငံဟာ မီးအများဆုံး သုံးနိုင်သလဲ။ အဓိကက ကျောက်မီးသွေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးတဲ့ စက်ရုံတွေများပြားလှတဲ့အတွက် တကမ္ဘ္ဘာလုံးက မယှဉ်ပြိုင်နိုင်လောက်
အောင်အထိကို စက်မှု့လက်မှု့အပိုင်းမှာ ဈေးအချိုဆုံးနှင့်အဆင့်အမီဆုံး အဆင့်အနိမ့်အမြင့် စက်ရုံပေါင်းများစွာ လည်ပတ်နိုင်သွားတာပါ။ ပြီးတော့
စက်ရုံရဲ့အသံဘယ်လောက်ကျယ်သလဲ။ ဘယ်လိုနေရာမှာ တည်ဆောက်ထားသလဲ။ google earth ရှိသူများ ကြည့်တတ်သူများ ကြည့်နိုင်ပြီး ရှာဖတ်သူများရှိက
ရှာဖတ်စေလိုပါတယ်။ ခုပြောနေတာ ဘယ်ဖက်ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလိုစိတ်မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့။ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ အမြဲတမ်း တသက်တာလုံးလုပ်ကိုင်ဖို့
မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဘယ်အချိန်ဖယ်ပေးရမလဲ။ သူပေးနိုင်တဲ့ ဈေးနှုန်းထက် ချိုသာတဲ့သူက နည်းပညာနှင့်ပေါင်းပြီး သင့်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းချပေးပြီး လူထု့အတွက် အနစ်နာခံပေးရင်
ဖယ်ပေးရတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာတကမ္ဘ္ဘာလုံးက စက်မှု့လက်မှု့တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဟာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ တွေ့ကြုံနေတဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ made in china ဆိုတဲ့ တံဆိပ်တိုင်းကို
လူတိုင်းနီးပါး တွေ့ဖူးမှာပါ။ နာမည်အကြီးဆုံး iphone, ipot, ipad, mac book, ထုတ်လုပ်နေတဲ့ အဓိက ပင်မစက်ရုံနှင့် apple product ကိုယ်ထည်တွေကို
ထုတ်လုပ်ပေးနေတဲ့စက်ရုံတွေ ဘယ်မှာ ရှိသလဲ။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား များများသုံးနိုင်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံပါ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ မီးအားကြောင့် စက်ရုံတွေများလာတာ မဟုတ်ဘဲ။
နည်းပညာပိုင်းမြင့်မားပြီး။ စက်ရုံတစ်ရုံကို ၂၄ နာရီ ပတ်လုံးနီးပါး လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက် တရုတ်နိုင်ငံသား လုပ်သားတွေ ရှိနေလို့ပါ။ တရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာ တစ်ခြားနိုင်ငံမှာ
အောက်ခြေလူတန်းစား မလုပ်တတ်တာ ဘာ့ကြောင့်လဲ။ တစ်ခြားနိုင်ငံသားတွေကို ဘာလို့မခန့်သလဲ။ အဓိကက နိုင်ငံချစ်စိတ်ကြောင့်၊ လူမျိုးချစ်စိတ်ကြောင့်ပါ။ တစ်ခြားနိုင်ငံမှာ
နည်းပညာပိုင်းလုပ်နေတဲ့တရုတ်တွေလဲ တစ်ချိန်မှာ တရုတ်ကို ပြန်ကြတာပါပဲ။ အဲ့တော့ မျက်စိဖွင့်၊ နားစွင့်ကြည့်လိုက်ပါ။ အခု ကော့သောင်းမှာ ပထမဦးဆုံး စတင်
တည်ဆောက်တဲ့စက်ရုံရဲ့ mega watt ဟာ တရုတ်ရဲ့ တစ်သန်းပုံပုံရင် တစ်ပုံတောင် မရှိသေးပါဘူး။
၄။ မြန်မာနိုင်ငံကို ဒီနည်းပညာ ရောက်လာရင် အောင်မြင်စွာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားထုတ်ပေးနိုင်ရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ။ မြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်သွားနိုင်သလား၊
ဆုတ်ယုတ်သွားနိုင်သလား။ စဉ်းစားပါ။ အခုလျှပ်စစ်စက်ရုံကို တည်ဆောက်တဲ့သူဟာ ကော့သောင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့။ မြန်မာနိုင်ငံသားပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ပြီး ကြီးပွားချင်ရင် သူ့မှာ တစ်ခြားနည်းလမ်းတွေ အများကြီးရှိပါလျှက်နဲ့ ဘာလို့ ဒီစက်ရုံကို တည်ဆောက်သလဲ။ သူ့ပိုက်ဆံသန်းနဲ့ချီပြီး ဒီစက်ရုံကို
တည်ထောင်သလဲ။ တစ်ခြားနိုင်ငံသားဆိုရင်ထားပါ။ သူတစ်ခြားမြို့တွေမှာ သွားတည်ရင်ကော မဖြစ်ဘူးလား။ Result ကတော့ တစ်ခုတည်းပါ။ သူလည်းကော့သောင်းသားဖြစ်လို့
ကော့သောင်းမြို့ကြီးကို သံယောဇဉ်ရှိလို့၊ ကော့သောင်းကလူတွေကို တိုးတက်စေချင်လို့ လုပ်ဆောင်ပေးလိုက်တာပါ။ ဒါကို အတိုက်အခံလုပ်နေကြတဲ့သူတွေဟာ ဘာလို့လဲ။
ကို့စီးပွားရေးကြောင့်လား။ မတိုးတက်စေချင်လို့လား။ တကယ်တော့ ဒီလို အနစ်နာခံလုပ်ပေးတဲ့လူမျိုးကို လက်ကမ်းကြိုဆိုသင့်တာပါ။ မြန်မာပြည်အနှံ့ အဲ့လိုစက်ရုံတွေ
ပိုပြီးများလာရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် လူနေမှု့အဆင့်အတန်းမြင့်မားလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ထည့်စဉ်းစားပါ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပထမဦးဆုံး ထုတ်လုပ်အောင်မြင်သွားရင်
အဲ့နည်းပညာကို သူကကော လက်ဆင့်ကမ်းမသွားဘူး တဲ့လား။ မြန်မာပြည်မှာကော ဒီနည်းပညာ မပြန့်ပွားသွားတော့ဘူးလား။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့
နည်းပညာတိုင်းဟာ တိုးတက်သွားတာချည်းနီးပါးပါပဲ။ ခုအင်တာနက်ကို ကျွန်တော်တို့ ခင်ဗျားတို့ ဘာလို့သုံးနိုင်သလဲ။ အင်တာနက်ဆိုတာ ဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ
ရင်းနှီးလာသလဲ။ ရှေ့ကနေ အကုန်အကျခံပြီး။ နည်းပညာတွေ ပြည်တွင်းရောက်အောင် သယ်လာနိုင်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့တွေ ခုလိုအင်တာနက်ကို သုံးနိုင်လာတာပါ။
တကယ်လို့သာ ဒီနည်းပညာ မရောက်လာရင် ခုချိန်အထိ fax ထိုးတဲ့ခေတ်၊ လက်နှိပ်စက်ခေတ်ကနေ တိုးတက်လာမယ် မထင်ပါဘူး။ ခုဆိုရင် လူတော်တော်များများ
ကွန်ပျူတာဆိုတာ သိလာပြီး။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်လာတာ၊ ဒီပညာရပ်နဲ့ရပ်တည်လာနိုင်တာ ဘယ်သူတွေလာလုပ်သွားတာလဲ။ ဘယ်သူတွေက လာသင်ပေးနေတာလဲ။
ကိုယ့်နိုင်ငံသားအချင်းချင်း နည်းပညာတွေ လက်ဆင့်ကမ်းပြီး သင်တန်းတွေ ပေးနေကြလို့ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ အဲ့သင်တန်းတွေကကော ဘာကိုမှီခိုနေရသလဲ။ ပြန်စဉ်းစားဖို့တော့
လိုပါတယ်လို့ ကျွန်တော် အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒီလိုအခွင့်အရေးကို မကြိုဆိုပဲ လူမျိုးစုအများအတွက်မကြည့်ဘဲ။ လူနည်းစုအတွက်ပဲ
ကြည့်နေရင်တော့ အဲ့လူနည်းစုပဲ ချမ်းသာသွားမှာပါ။ လူများစုအတွက် အကျိုးမရှိပါဘူး။
ကျွန်တော် ဘယ်သူ့ကိုမှ ထိခိုက်လိုစိတ်နှင့်ပြောခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ တိုးတက်ဖို့ အဓိကကျတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို ဈေးချိုချိုနှင့် သုံးနိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးတဲ့သူကို
ကြိုဆိုလိုက်ကြပါ။ ခေတ်မီအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်ကြပါ။ ကော့သောင်းမြို့ဟာ မီးအားကိုတောင် ထိုင်းနိုင်ငံကနေ မျှသုံးဖို့အထိ ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့မြို့ပါ။ ခုပြောနေတာ
ကော့သောင်းတစ်မြို့တည်းအတွက် မဟုတ်ဘူးနော်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက် စတင်လာတဲ့ မျိုးစေ့လေးတစ်စေ့ဆိုတာ သိသင့်တယ်ထင်လို့ ကျွန်တော့်အနေနှင့်
အားလုံးအမြင်မှန်ရပြီး အနာဂတ်အတွက် အကျိုးမျှော်ကိုးနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း မြန်မာနိုင်ငံ သားတွေ အားလုံးကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ ပြန်လည်အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်တိုင်းပြည်
ကောင်းကျိုးအမြန်ဆုံးပြုနိုင်ပါစေလို့ လည်းဆုတောင်းရင်း …………
Kyaw Thu has written 8 post in this Website..
A person working inaINGO. Born in1950s. Believes in truth. Love to read and write Jokes and Satire.
View all posts by MTY →
ကိုညီရဲ့ဆိုက်မှာဖတ်ဖူးပါပြီ .. ။ အခုလဲထပ်ပြီးအားပေးသွားပါတယ်ဗျာ ။
postထဲမှ လက်တွေ့ကျကျ စဉ်းစားထားတာတွေ လက်ရှိဖြစ်နိုင်ချေရှိတာကို ချရေးပြထားတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်
တရုတ်ပြည်ကို ဦးကြောင်တို့ မြန်မာ့တပ်မတော်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး သိမ်းပိုက်ဖို့ ကြံစည်နေပြီ။ အဲဒါ ကွန်ပြူတာ ပြင်ညာရှင်ဗော်လံတီယာ ရှာနေတယ်။ အဲဒါစိတ်ဝင်စားလား။ ကွန်ပြူတာ ပြင်တတ်ချင်ယောင် ညာပြီး တရုတ်ခေါင်းဆောင်တွေကို အရှင်လက်ရဖမ်းရမှာ….။ ဖမ်းကွာ ကြေးမုံဂျီးအမျိုးမှန်သမျှ…
ကမ္ဘာကြီးရဲ့..ဂေဟစနစ်ကို ..ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံကြီးများက.. ဖျက်စီးခဲ့လို့.. အခုလိုဖြစ်နေကြပြီးပြီ..
အခုလို… ဖြစ်ပြီးခါမှ.. သူတို့က မီဒီယာတွေလွှမ်းမိုးထားနိုင်တော့.. အခုမှ.. ဂရင်း..အစိမ်း.သဘာဝ.. .ဂေဟ ထအော်ကြတာပါ..
ကိုယ်တိုင်ကတော့.. ကာဗွန်တွေထုတ်ဆဲ..မိခင်သဘာဝကို ထိခိုက်ဖျက်စီးနေဆဲပဲ..။
ဒီလို သူတို့မီဒီယာတွေက.. အသိပညာပေးသလိုလိုနဲ့.. ဘရိမ်းဝရ်ှလုပ်တာကြောင့်.. မြန်မာပြည်လို..အူကြောင်ကြား..မွဲတေနေတဲ့တိုင်းပြည်က.. လူတွေကပါ.. သံယောင်လိုက်.. .. ဂေဟ..ဂရင်း.. ကမ္ဘာပူနွေးလာတယ်..ထလုပ်ကြတာပေါ့..
စက်မှုနိုင်ငံဖြစ်ဖို့အရေးအကြီးဆုံးလျှပ်စစ်မီးမရှိပဲ.. အုံဖွဆိုပြီးများ.. စက်တွေလည်ချင်နေသလားမသိ..။
Country Annual CO2 emissions
(in thousands of metric tonnes) % of world
World 29,888,121 100% UN Estimate
China (ex. Taiwan, Macau, Hong Kong) 7,031,916 23.53% UN Estimate
United States 5,461,014 18.27% UN Estimate
European Union (27) 4,177,817 13.98% UN Estimate
India 1,742,698 5.83% UN Estimate
Russia 1,708,653 5.72% UN Estimate
Japan 1,208,163 4.04% UN Estimate
Germany 786,660 2.63% UN Estimate
Canada 544,091 1.82% UN Estimate
Iran 538,404 1.8% UN Estimate
United Kingdom 522,856 1.75% UN Estimate
South Korea 509,170 1.7% UN Estimate
Mexico 475,834 1.59% UN Estimate
Italy (including San Marino) 445,119 1.49% UN Estimate
South Africa 435,878 1.46% UN Estimate
Saudi Arabia 433,557 1.45% UN Estimate
လက်တွေ့ကျပြီး ၊ အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့ အတွေးအခေါ်မျိုး မရှိရင်တော့ ၊
လက်ရှိ တရုတ်ကျွန် ဘဝ ကနေလွတ်ဖို့ မမြင်ပါဘူး ။
လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ( စွမ်းအင် ) ကို ၊
ဖေါဖေါသီသီ မသုံးနိုင်သေးသရွေ့ကတော့ ၊
ဆင်းရဲသား ငမွဲတို့ရဲ့ ကျွန်တိုင်းပြည်ဘဝက မလွတ်နိုင်ပါဘူး ။
အင်းလေ ၊ အကောင်းဘက်က လှည့်တွေးရင်တော့လည်း ၊
တိုင်းသူပြည်သားတွေ ဆင်းရဲနေမှသာ ၊
ကိုယ့် စိတ်ကြိုက် ပေါပေါ ပဲပဲ နှင့် ၊
ဆင်းရဲသားတွေကို ခိုင်းချင်တာ ခိုင်းလို့ရတာပေါ့ ။
အိမ်ဖေါ် ကို ဒါဇင် နှင့်ချီပြီး ခန့်လို့ရတာပေါ့ ။
သမီးလေးတွေလည်း – – – ဟီ ဟိ ။
ကောင်းပါတယ် ၊ ဒီလိုပဲ ဆက်လုပ်ကြပါ ၊
ဒီလိုပဲ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ဆိုတဲ့ စကားကိုပဲ ဆက်ပြောကြပေါ့ ။
အမေရိကန် က Kyoto Protocol ကို ၊
ဘာကြောင့် ဆိုင်း မထိုးတာ ။
ကနေဒါ က Kyoto Protocol ကနေ ၊
ဘာကြောင့်ထွက်သွားတာ တွေကို ၊
သိအောင် လေ့လာလိုက်ကြပါအုန်း ။